Cubot P40 wuxuu imaan doonaa 18-ka Maajo isagoo wata kamarad afar geesood ah oo loo yaqaan 'Budget King' Androidsis
Qalabka mobilada muddo dhowr sano ah ayaa horumar ballaaran ka sameynaya dhanka tikniyoolajiyadda. Shirkado badan ayaa u heellan R&D si ay u awoodaan inay ku soo bandhigaan taleefoonadooda ugu dambeeyay, waa muhiim haddii aad rabto inaad bixiso terminal leh astaamo muhiim ah qiimo lagu hagaajiyay.
Maanta Cubot ayaa ku dhawaaqay taariikhda la soo bandhigayo astaanta soo socota ee shirkadda, Cubot P40. Telefoonku wuxuu imaanayaa 18ka Maajo oo ay la socdaan ilaa afar dareemayaal xagga dambe oo leh magaca Quad-camera Miisaaniyadda King oo waxqabadkiisu noqon doono mid aad u cajaa'ib leh markay tahay sawir qaadista iyo sameynta fiidiyowyo tayo sare leh.
1 Wax kasta oo cusub ee Cubot P40 ayaa na siiya
2 Kaamirooyinka L-qaabeeya ee leh Sony IMX486 AI Quad Camera sensor
3 Android 10 oo ah nidaamka qalliinka
4 10 cutub oo loogu talagalay wajiga kuwa qiyaasaya qiimaha iibka adduunka ee Cubot P40 iibin doono bisha soo socota ee May 18
Wax kasta oo cusub ee Cubot P40 ayaa na siiya
Cubot P40 cusub ayaa shaaca ka qaaday dhammaan sifooyinka ay ka mid yihiin Shaashadda 6,2-inji oo leh teknoolojiyadda LTPS ayaa muuqata, waa tiknoolajiyad shaashad-fidsan ah oo loogu talagalay bandhigyada xallinta sare waxayna bixisaa awood koronto yar. Xaaladdan oo kale waxay u adeegi doontaa si shaashadu ay si dhammaystiran ugu shaqeyn karto isticmaalka ugu yar ee awoodda batteriga.
Telefoonkan ayaa sidoo kale leh batteri weyn oo ku filan oo nolosha ku siin kara P40 in ka badan 24 saacadood, batteriga lagu daray waa 4.200 mAh. Mid ka mid ah qodobbada wanaagsan ayaa ah in shirkaddu xaqiijisay in batteriga la saari karo, sidaa darteed waa lagu beddeli karaa wakhti kasta mid kale mustaqbalka.
Cubot P40 wuxuu leeyahay qaabeyn ah 4 GB oo RAM ah iyo keydinta waa 128 GB, in ka badan oo ku filan si loo badbaadiyo sawirro badan, dukumiinti iyo fiidiyowyo badan. Sida laga soo xigtay Cubot Facebook, qaabkani wuxuu noqon doonaa taleefannada casriga ah ee ugu jaban, sidaas darteed waa taleefan casri ah oo heer sare ah.
Kaamirooyinka L-qaabeeya ee leh Sony IMX486 AI Quad Camera sensor
Soo saaraha Aasiya wuxuu go'aansaday inuu sharad ku sameeyo qaabeynta kamarad laba jibbaaran dhabarka, muraayadaha indhaha ayaa muhiim u ah helitaanka waxqabadka ugu fiican haddii aad rabto inaad sawir qaaddo wakhti kasta iyo jawi kasta. Kaameradda gadaal ee ugu weyn waa shidma 12 MP oo ka socota Sony waxaa lagu caawiyay muraayadaha saddex-geesoodka ah.
El Casriga Cubot P40 dhinaca hore waxay ka dooratay 20 megapixel sensor oo ka timid Samsung, oo ku habboon sawirka ugu fiican ee leh sawirro isku mid ah, fiidiyowyo iyo shirarka fiidiyowga ah. Isku darka Sony iyo Samsung lenses ayaa ka dhigaya mid u ifaya tayada ugu dambeysa ee sawirada.
Waa la arki karaa in kaamirooyinka ay ku yimaadaan qaab L ah si ay uga faa'iideystaan ​​booska una qabtaan sawirada ugu fiican, labadaba midka ugu weyn iyo kuwa taageera muraayadaha Sony. Dhinaca midig waxay muujineysaa Laydh Laydh ah oo nalagu taageerayo xaaladaha aan ugu baahanahay iftiinka oo aan ka dhigno mid kasta oo ka mid ah muuqaalka lagu keydiyay keydkeena.
Android 10 oo ah nidaamka qalliinka
Telefoonka Cubot P40 wuxuu la imaan doonaa nooca ugu dambeeya ee Android xagga hore, midka la doortay ayaa ah Android 10 hab nadiif ah oo aan horay loo sii rakibin codsiyada dhinac saddexaad. Waa lagama maarmaan haddii aad rabto inaad ka hesho waxqabadka ugu fiican ee casriga ah oo ay jiraan dad badan oo go'aansada inay sidaas sameeyaan si isticmaaleyaashu u doortaan codsigooda ay ku rakibayaan iyo kuwa aan ahayn.
Iyadoo Android 10 ay la imaaneyso marin u helid ka wanaagsan maaddaama ay hirgeliso shaqooyinka sida Live Caption, Live Transcribe, amplifier, hagaajinta qaybta sawirada, qaabka diiradda (nidaam lagu joojiyo barnaamijyada si ku meel gaar ah) iyo qaab mugdi ah oo horay loo yaqaan (Muuqaalka Madoow), iyo waxyaabo kale oo badan.
Cubot iyada oo loo marayo boggeeda rasmiga ah waxay bixisaa taageero cusbooneysiin ah dhammaan taleefannada laga heli karo buugga ballaaran ee ay leedahay. Kuu ogolaanayaa awood soo dejiso noocyada xasilloon ee qalabka kaleSidaa darteed waa muhiim inaad awood u yeelatid inaad dhammeystirkaaga cusbooneysiiso.
10 cutub oo loogu talagalay wajiga kuwa qiyaasaya qiimaha iibka adduunka ee Cubot P40 iibin doono bisha soo socota ee May 18
Cubot wuxuu bixin doonaa 10 cutub ilaa siin weyn kuwa guuleysta si ay u tijaabiyaan qalabka una soo bandhigaan horumarin. Si aad uga mid noqotid guuleystayaasha, waa inaad qiyaastaa qiimaha iibka adduunka ee taleefanka. Haddii aad xiiseyneyso telefoonka, waad ku dari kartaa gaariga on AliExpress lana ogeysiiyo goorta iibku bilaabmayo.
Ka sokow tan, sida isku aadka waxaa lagu qabtaa barnaamijka 'Gleam.io', waxaad ku dari kartaa xitaa dhibco dheeri ah oo u turjumaya fursado badan adoo qaadaya talaabooyin sida raacitaanka Cubot ee YouTube, Instagram, Facebook iyo Twitter.
?? Kaqeyb gal shaxda adigoo gujinaya halkan ??
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Cubot P40 wuxuu imaan doonaa 18-ka Maajo isagoo wata kamarad afar geesood ah oo loo yaqaan 'Budget King'
Ku tartan waqtiga dhabta ah kuwa kale ee golf-ka ee Swing Perfect
Sida loogu midoobo faylal badan hal PDF ah